warkii.com » Shantii Qalad Ee Ole Gunnar Solskjaer Uu Sameeyey Ee Sababta U Noqday Guul-darradii Ee Guul-darradadii Man United Iyo Sidii Chelsea Uga Faa’iidaysatay
Shantii Qalad Ee Ole Gunnar Solskjaer Uu Sameeyey Ee Sababta U Noqday Guul-darradii Ee Guul-darradadii Man United Iyo Sidii Chelsea Uga Faa’iidaysatay
Ole Gunna Solskjaer waxa uu sameeyey qaladaad waaweyn oo sabab u noqday in Manchester United lagu garaaco Semi-finalka FA Cup, kuwaas oo ay Chelsea uga faa’iidaysatay sidii ugu habboonayd, isla markaana ugu gudubtay finalka oo ay Arsenal kula ciyaari doonto.
Guul ay u qalantay ayay Chelsea ka gaadhay Manchester United, waxaana Lampard iyo xiddigihiisa garab siiyey Ole Gunna Solskjaer iyo goolhaye David De Gea.
Manchester United oo 19 kulan oo xidhiidh aan laga badin ayaa u safartay magaalada London, waxaana garoonka Wembley Stadium ay albaabada iskugu xidheen Chelsea oo soo afjartay guul-darro la’aantii Red Devils ee tan iyo bishii January soo jirtay.
Dea Gea ayaa sameeyey laba qalad oo waaweyn oo aanay cidina hadal ka keeni karin iyo goolka saddexaad oo uu isagana qayb ku lahaa, maadaama ay ahayd inuu kasoo baxo goolka oo uu soo doonto kubadda laynka goolkiisa lasoo hor-dhigay ee garabka fog laga soo jabiyey.
Goolhayahan oo sannadkii hore saxeexay heshiis rikoodh jabis ah oo ka dhigay goolhayaha ugu mushaharka badan Manchester United, waxa xili ciyaareedkan uu sameeyey waxyaabo badan oo niyad jab ku ahaa kooxdiisa, kuwaas oo ka hor istaagay guulo muhiim u ahaa.
Manchester United ayaa ku qasban inay ka fikirto inay si degdeg ah usoo ceshato goolhaye Dean Henderson oo amaah ugu maqan Sheffield United, waxaana Solskjaer oo ku adkaysanayay inuu ku kalsoon yahaya De Gea uu ugu dambayn ka fikiri doonaa inuu hoos u dhigo niyadda wanaagsan ee uu u hayo goolhayaha reer Spain, isla markaana uu beddelkiisa diyaarsado.
Marka laga yimaaddo qaladka goolhaye David de Gea, tababaraha ayaa eedda ugu weyn ee guul-darrada iska leh, waxaanu sameeyey shan qalad oo fursad siiyey Chelsea oo iyaduna si fiican uga faa’iidaysatay.
Shanta qalad ee uu tababare Ole Gunna Solskjaer sameeyey ayaa waxay kala yihiin:
In aanu ciyaarsiinin Sergio Romero
Goolhayaha reer Argentine ayaa ku qornaa kulamada FA Cup iyo tartankii kale ee Carabao Cup, waxaanu soo bandhigayay ciyaaro tayadoodu sarrayso iyadoo uu tababare Ole Gunna Solskjaer maalin kasta oo fursad la siiyo tusinayay inuu u qalmo inuu goolhayaha koowaad ee kooxda kula tartamo David de Gea.
Romero ayaa dhoosha ka qoslayay markii uu Olivier Giroud kubadda dhabta u saaray David de Gea ee ay goolka isla galeen, kaddibna uu mid kale masaafo fog kaga laagay Mason Mount, waxaanu Romeru ku ciilloonayay in haddii tartankii uu kusoo dedaalay ee uu kooxda keenay semi-finalka loo dayn lahaa inuu shaqadiisa sii wato, inuu ugu yaraan badbaadin lahaa kubbadaha uu De Gea goolkiisa u ogolaanayay inay sida fudud u galaan.
Fadhiisintii Paul Pogba iyo Scott McTominay
Ole Gunna Solskjaer qalad ayay ku ahayd inuu fadhiisiyo Paul Pogba oo muhiim u ahaa qaab ciyaareedka kooxdiisa intii uu soo laabtay, isla markaana firfircooni iyo dhiirigelin ba siinayay Bruno Fernandes iyo Nemanja Matic, halka uu kubbado xirfadaysanna u geynayay Martial iyo Rashford.
Haddii ay la noqotay inuu Pogba fadhiisiyo, waxay ahayd inuu kusoo bilaabo Scott McTominay, laakiin taasina may dhicin, waxaanay labadan ciyaartoyba fadhiyeen kaydka iyadoo Manchester United la bahdilayo.
Nemanja Matic iyo Fred ayaa u muuqday intii ay ciyaartu socotay in aanay u diyaarsanayn sida Bruno Fernandes, isla markaana aanay u babbac dhigi karayn Mateo Kovacic iyo Jorginho.
Qaab difaac ah oo uu ciyaarta ku bilaabay
Ole Gunna Solskjaer ayaa markiiba laga arkay inay baqasho hayso, sababtoo ah waxa uu kusoo bilaabay shan difaac ah, isagoo yareeyey weerarkii, khadka dhexena laacibiin ay muddo hore iskugu dambaysay inay wada ciyaaraan uu iskugu keenay.
Marka laga yimaaddo ciyaartoyda uu kusoo galay, Solskjaer waxa uu mar walba ciyaartoydiisa kala hadlayay laynka macallimiinta, waxaanu u sheegayay inay dib u fadhiistaan si ay iskaga xakameeyaan weerarka Chelsea, taasina waxay keentay inay meesha ka baxaan kubbadihii la gaadhsiin lahaa marcus Rashford.
Difaacyahannada Chelsea ee Kurt Zouma iyo Andreas Christensen may filayn inay ciyaar sidan ugu fudud noqon doonto, garoonka dhexdiisana ku raaxaysan doonaan.
Anthony Martial oo uu kaydka dhigay
Dabcan, Manchester United waxay ka fikiraysaa kulamada horyaalka Premier League ee labada ah ee u hadhay iyo sidii ay ugu soo bixi lahayd Champions League xili ciyaareedka dambe, taas oo kaga xidhan inay guuleystaan ciyaaraha u hadhay.
Laakiin haddana jamaahiirta Manchester United ma aqbali karayaan in kooxdoodu ay koob la’aan ku dhamaysato xili ciyaareedka, iyadoo midkii ugu dhawaana uu ahaa FA Cup oo ay semi-finalkiisa marayeen.
Solskjaer lama qabin dareenka taageereyaasha, waxaanu kaydka dhigay Anthony Martial oo ah laacibka ugu goolasha badan Man United fasal ciyaareedkan, waxaanu booskiisa keenay Daniel James oo aan waxba ka samayn garoonka.
Inkasta oo Martial uu keenay dhamaadka qaybtii hore markii uu dhaawacmay Eric Bailly, haddana weeraryahanka reer France ma helin kalsoonidii uu ku ciyaari lahaa haddii lagu soo bilaabo kulanka.
Kalsoonidii uu siiyey ciyaartoyda Chelsea
15kii daqiiqadood ee ugu horreeyey ciyaarta, Manchester United waxay cunaha haysay Chelsea, iyadoo tababaraha reer Norway uu u muuqday in libinta ay helayaan, laakiin qaladka jiray ayaa waxa uu ahaa in aanay jirin khatartii weynayd ee ay abuuri lahaayeen saddexlayda afka hore ee Martial-Rashford-Greenwood haddii ay wada ciyaari lahaayeen, taas oo uu hore uga sii calaacalay Lampard.
Markii ay Chelsea goolka dhalisay, waxa gebi ahaanba isbeddeshay kalsoonida iyo niyadda ciyaartoyda Blues, halka Manchester United ay sii dumayeen, illaa ay gaadheen heer ay is dhiibis ku dhowaadaan oo ay kubaddu ka khalkhasho.
Shantan arrimood oo dhamaantood ah qaladaad uu sameeyey tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa sabab u noqday guul-darrada Manchester United kasoo gaadhay semi-finalka FA Cup, waxaana si habboon uga faa’iidaysatay Chelsea oo finalka iska xaadirisay, isla markaana ay kulmi doonaan Arsenal oo hore uga soo takhalustay Manchester City oo ay 2-0 ku garaacday.